Kungani Khetha i-Chunkai？
Kungani sidinga ukwehlukanisa ukuthengisa kusuka efemini? Yize lesi sinqumo siminyene ngandlela thile, ukuqala kwethu ukuthi sinethemba lokuthi amakhasimende ethu azothola izinsiza zethu ezihamba phambili endaweni enomuzwa ongcono.
Izinhlobo Zempahla Yokupakisha Eshodayo futhi Ebuyisekayo
Ngenhlanhla kunezinto eziningi zokubopha ezingaboliswa futhi ezingaphinde zisebenze ezingatholakala. Lokhu kufaka phakathi: Iphepha nekhadibhodi - iphepha nekhadibhodi kuyasebenza futhi, kuyaphinde kusetshenziswe futhi kuyabola. Kunezinzuzo eziningi kulolu hlobo lomkhiqizo wokupakisha, hhayi okungenani iqiniso lokuthi ...
Kungani Ukukhethwa Kwamabhokisi Wokupakisha Ngokwezifiso Kubalulekile?
Akekho umuntu ongabona izinto lapho uthi nhlá. Ukuma kwangaphandle noma ukwakheka okuza phambi kwamehlo akho kuqala. Uma lokhu kubukeka noma ukwakheka kuheha amakhasimende, lapho-ke azothenga umkhiqizo nakanjani, ngaphandle kwalokho, ukulahlekelwa kwakho kwamasheya emakethe. Uma umbono oyinhloko wamabhokisi okupakisha womkhiqizo wehluleka ...
Ibhokisi Le-Pizza Elisezingeni Eliphakeme Ngamasayizi Ahlukahlukene
Amabhokisi E-Pizza Asezingeni Eliphezulu Sakha umugqa obanzi wamabhokisi we-pizza wesitoko afika ngosayizi ohlukahlukene. Sisebenza ngokukhethekile emabhokisini e-pizza angokwezifiso ezitolo zamaketanga avela ezitolo ezingama-4-50. Futhi sinamandla okugijima okuncane futhi. Senziwe uku-oda indawo futhi ...